Jhapa – Federal Socialist Forum Nepal
by admin · Published September 23, 2013 · Last modified October 9, 2013
संघीय समाजवादी पार्टी नेपालको शनिश्चरे २ मा वडा समिति गठन
असोज ५, संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले शनिश्चरेको वडा नं. २ मा वडा समिति बनाएको छ। असोज ५ गते भएको प्रथम वडा भेलाले भक्तमणि गुरुङको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति निर्वाचित गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षमा...
Jhapa / Limbuwan / News
संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले पथरीको वडा नं. ४ र ५ मा वडा कमिटि विस्तार
भदौ १३ गते, पथरी । संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले पथरीको वडा नं. ४ र ५ मा वडा कमिटि विस्तार गरेको छ । स्थानीय समुदायिक भवन किराती चोकमा भएको प्रथम वडा भेलाले दुई वडामा वडा...
समाजवादीको विरोध सभा
भदौ ६ गते, पथरी । संघीय समाजवादी पार्टीले विराटनगरमा विहिवार विरोध सभा गरेको छ । सनिश्चरे माई स्थान देखि सुरु भएको ऱ्याली ट्राफिक चोकमा पुगेर पार्टीले कोण सभा गरेको हो । माई स्थानबाट सुरु...
संघीय समाजवादीमा २१ जना प्रवेश
फिपराज बेघा, १३ अगष्ट, पथरी । जातीय मुक्तिको लागि संघीयता र बर्गीय मुक्तिको लागि समाजवाद भन्ने मूल नाराको साथ स्थापित संघीय समाजवादी पार्टीमा विविन्न पार्टीमा परित्याग गरी २१ जना व्यक्तिहरु प्रवेश गरेका छन् ।...